Rw Rooble oo kulan sagoonti la qaatay safiir uu dhammaaday muddo xileedkiisa | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Rw Rooble oo kulan sagoonti la qaatay safiir uu dhammaaday muddo xileedkiisa
Rw Rooble oo kulan sagoonti la qaatay safiir uu dhammaaday muddo xileedkiisa
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaliya, Ben Fender oo ay u dhamaatay muddaadii shaqadiisa ee Dalka Soomaaliya.
Kulanka dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ingiriiska oo ku saleysan dhinacyo kala duwan.
Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa ka mahadceliyay sida loogu soo dhaweeyay dalka Soomaaliya iyo sida loogu fududeeyay inuu Guto howlihiisa, ayna qabten howl badan oo muhiim ah.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyey safiirka kaalintii uu ka qaatay xoojinta xiriirka labada dal, isagoo u rajeeyey safiirka mustaqabl wanaasgan.
Dowladda Ingiriiska ayaa dhawaan Safiir cusub u magacaawday dalka Soomaaliya, waxaana Safiirka oo Haween ay xilka kala wareegeysaa Safiirkii hore ee Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Fender kaasoo ay u dhamaatay muddaadii shaqadiisa.
Previous articleDHAGEYSO:Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday askari dil gaystay
Next articleSylvanus Osoro iyo barasaab ku xigeenka Kisii oo xabsiga loo taxaabay